Xumeynta iyo dariiqooyinka looga hortago - Semaltku waxay ku tusin doontaa tiro yar
Julia Vashneva, oo ah Semt Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamilka, ayaa indhahaaga u furaya xirfado loo baahan yahay in la qabto inta lagu hayo khayaanada.
Ku dhowaad dhammaanteen annaga ayaa kufilnaa fayrasyada kombiyuutarka iyo nacfiyada qaar ka mid ah nolosheena. Anigu ma saxan yahay? Ma aha mid xiiso leh in fayruusku leeyahay; Taa baddalkeeda, waa inaad ka walwashaa nabadgelyadaada internetka iyo amniga khatarta. Marka kombiyuutarku uu bilaabo inuu hoos u dhaco, waa wakhtiga markaad ka fogaato nacnaca oo aad qaaddo tallaabooyin culus.
Isticmaal difaac adag oo dhan dhibcaha
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad sameyn kartid waa inaad isticmaashaa difaac adag oo meel kasta ah. Tani waxay nidaamkaaga ka ilaalin doontaa weerarada ku saleysan websaydka, boogaha internetka, fayraska isbeddelka iyo xawaareynta. Ilaalinta ugu badnaan, waa in aad dhaqaajiso software-kaaga khatarta ah ee halista shabakadda oo aad ku baaro qalabka hal mar ama laba jeer toddobaadkii. Waxaad sidoo kale isku dayi kartaa Nidaamyada Ka Hortagga Argagixisada, Dab-damiska, Fahamka, SONAR, iyo Antivirus ee ammaankaaga internetka. Ka jawaabista Ammaanka Symantec wuxuu leeyahay waa in aan ilaalinno barnaamijkeena iyo nidaamyada qalliinka si taxadar leh.
Yaree weerarka weerarka
Hoos u dhigista dusha sare waa mid muhiim ah. Waa inaad ka tirtirto codsiyada aanad isticmaaleynin. Halkaan halkan iigu sheego in khatarta sare ama xasaasiga ah ay sababi karto ugu badnaan nidaamkaaga. Taasi waa sababta aad ugu baahan tahay qalabkaaga kiniinada mar hal maalin oo ka fogow inaad rakibtid software aan la aqoon oo aan la rabin.
Hagaajinta goobaha Badbaadinta ee Symantec Endpoint Protection
Hagaajinta siyaabahaaga ilaalinta ee Symantec waa muhiim..Xitaa goobo dhowr ah ayaa keeni kara kacdoon ku saabsan ilaalintaada internetka. Waa inaad ilaalisaa goobaha shuruudahaaga oo aad hubisid asturnaantaada si markaa khawariistu kuugu jilaan.
Ku haayo khariidadaha browserka la cusbooneysiiyay
Inta badan weeraryahannadu waxay qiimeeyaan daalacashadaada kadibna isku day inaad ku qaaddo nidaamyadaada. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in aad ilaaliso goobahaaga iyo macaamiishaadahaaga ilaa taariikhda. Waa inaadan waligaa isticmaalin Internet Explorer, Acrobat, Flash, iyo Photoshop Abode adiga oo aan ku eegin kombiyuutarkaaga ama qalabka mobile. Fayrasyo ​​badan iyo nadaafad badan ayaa nidaamkaaga ku soo maraya Internet Explorer. Sidaa darteed, way ka fiican tahay inaad ka fogaato browser-kaaga oo isku day Google Chrome ama browser kale oo aad dooratay.
Isticmaalida isticmaalka P2P
Mid ka mid ah hababka ugu sahlan uguna dhaqsaha badan ee loo yaqaan hackers ayaa isticmaala si loo xayaysiiyo nacnaca waa shabakadaha asaliga ah (P2P). Waa inaad marwalba joojisid isticmaalka P2P. Sidaa awgeed, waxaad abuuri kartaa oo hirgelin kartaa siyaasadaha aan ahayn P2P sida isticmaalka kombiyuutarkaaga waa in la xaddidaa si aysan dibedda u heli karin qalabkaaga. Habkan, waxaad xaqiijin kartaa in kombiyuutarkaaga laga badbaadiyo badbaada iyo fayrasyada si aad u badan.
Iska daa AutoRun
Waxaad joojin kartaa imaatinka fayrasyada iyo nacfiyada adoo adeegsanaya AutoRun. Markaad soo dejineyso wax, waa inaad had iyo goor damisaa si aan alaabta aan loo baahnayn kuugu rakibin qalabka kombiyuutarkaaga.
U hubso in dhammaan qalabka loo adeegsado OS
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan waa inaad hubisaa in mid walba iyo mid kasta oo OS ah si haboon loo isticmaalo. Shirkadaha sida Apple, Microsoft iyo Google ayaa xirxiray adeegga, xirmooyinka amniga iyo habka loogu talagalay macaamiisha caalamiga ah bil kasta. Alaabtoodu waxay nagu caawinayaan inaan saxno cilladaha nidaamyada hawlgalka. Waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah alaabtaas oo aad ku rakibtid kombiyuutarka si aad ugu badbaado ugu badnaan iyo ilaalinta internetka. Haddii aad isticmaaleysid Mac OS X, Windows ama nidaamka kale ee hawlgalka, waa inaad had iyo jeer u cusbooneysiisaa daalacashadaada iyo barnaamijyadaada mar ama laba jeer bishii Source .